Muhiimad Leh shahaadooyinka
• KPAL waa sumcad caan ku ah sumcadda Filimada Gawaarida Gawaarida Gawaarida, oo asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka.
• KPAL waxay leedahay noocyo badan oo ah alaabada filimka difaaca gawaarida; PPF (Filimka Ilaalinta Rinjiga), LPF (Filimka Ilaalinta Fudud), RPF (Filimka Difaaca Saqafka), WPF (Filimka Difaaca Muraayadaha), iwm.
• Wax soo saarka KPAL waxaa soo saaray nidaam wax soo saar isku dhafan iyo nidaam sare oo R&D ah. Tikniyoolajiyadda u gaarka ah ee KPAL waxay dabooli kartaa isku-darka cusbada TPU, sameynta filimka TPU iyo sameynta kiimikada iyo daahan sax ah.
• Kooxda TSP (Bixinta Xalka Farsamada) Kooxda waxay taageertaa xalal farsamo oo kala duwan oo ay ku jiraan rakibaadda, dayactirka iyo toogashada dhibaatada macaamiisha.
Ningbo Chem-plus Waxyaabaha Cusub Tec.Co., Ltd ayaa la aasaasay
Ningbo Chem-plus wuxuu PPF ku horumariyay suuqa gudaha Shiinaha
Shirkadda JW Film ayaa la aasaasay
Nooca filimka KPAL ayaa la aasaasay
PPF ee filimka KPAL wuxuu bilaabay inuu kala gooyo macaamiisha dibadda